Isiqhano seGlaves Popular Jewelry
Le pendant ethandabuzekayo ibonisa iigloves ezinxibe imfazwe. Umbhalo okwigloves lasekhohlo ufundeka ngolu hlobo: "I-DAILY NEWS CHARITIES INC." Ukudumisa ukhenketho lwe-NY yeGlobal Gloves. (Impumlo enegazi, ukubila, iinkophe ezinwebayo kunye namazinyo akhululekileyo angaqukwanga.)
Intsimbi exabisekileyo: Isilivere yeSterling (925), igolide eli-10 Karat, igolide eyi-14 Karat, kunye negolide eyi-18
Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo-unxibelelane nathi.
Isiseko esingasasebenziyo: ICubic Zirconia
Ilitye elinqabileyo lemilo elijikelezileyo
Nxibelelana nathi isicatshulwa esenziwe ngesiko kunye neeDayimane.
Ubukhulu: 51mm (ubude b / ibheyile ibandakanyiwe)
Indawo: Isilivere esile kunye neGolide
** Umgexo othengiswe ngokwahlukeneyo.
Nceda unxibelelane nathi ukuba unayo eminye imibuzo malunga nobunye ohlobo okanye izitayile, ukubakho, imbonakalo, kunye nokukhethwa kobuntu.
Isilivere yeSterling (925)Igolide eyi-10K (417)Igolide eyi-14K (585)Igolide eyi-18K (750) Intsimbi exabisekileyo:
ICubic Zirconia (Emhlophe)ICubic Zirconia (Bomvu) Ilitye elixabisekileyo:
ISterling Silver (925) / iRose / iZirconia zeCubic (eziMhlophe )- $ 571.19ISterling Silver (925) / White / Cubic Zirconia (Bomvu )- $ 571.19ISterling Silver (925) / Mthubi / iZirconia eziCubic (Mhlophe) - $ 571.19I-10K yeGolide (417) / iRose / iZirconia zeCubic (ezimhlophe )- $ 1,979.99Igolide ye-10K (417) / emhlophe / iZirconia zeCubic (Mhlophe) - $ 1,979.9910K Igolide (417) / Mthubi / iZirconia zeCubic (Mhlophe) - $ 1,979.99I-14K yeGolide (585) / iRose / iZirconia zeCubic (ezimhlophe )- $ 2,789.99Igolide ye-14K (585) / emhlophe / iZirconia zeCubic (Mhlophe) - $ 2,789.9914K Igolide (585) / Mthubi / iZirconia zeCubic (Mhlophe) - $ 2,789.99I-18K yeGolide (750) / iRose / iZirconia zeCubic (ezimhlophe )- $ 3,166.79Igolide ye-18K (750) / emhlophe / iZirconia zeCubic (Mhlophe) - $ 3,166.7918K Igolide (750) / Mthubi / iZirconia zeCubic (Mhlophe) - $ 3,166.79 Okwahlukileyo:
Ngokusekelwe kwiingxelo ze-6
URashard Graham (IHouston, US)
Iigloves zebhokisi yesilivere
Le nkampani ihamba ngokukhawuleza okukhulu kuncedo lwabathengi. UKevin yindoda 💯
Ugqwetha uKatrina (Commack, US)
Ukonwaba kakhulu ngemveliso kunye nenkonzo
thomas resha (ELas Vegas, eUS)
ukuhambisa kwakukhawuleza kwaye into yenziwe kakuhle kwaye ijongeka ifana kakhulu nakwisivumelwano sokwenyani. Ngaba ungaphinda wenze ishishini kwakhona
UArthur Kramer (UTobyhanna, eUS)
Ndonwabe kakhulu ngemveliso endiyithengileyo kwinkampani yakho. Umzobo endiwucelile wawugqibelele. Enkosi kakhulu.